युरोपेली सुविधा र पूर्वी exoticism - टर्की मा बिदाहरू
टर्की मा बिदाहरू - यो हरेक कल्पना सान्त्वना संग समुद्र आफ्नो छुट्टी खर्च अपेक्षाकृत सस्तो र एक महान अवसर हो। आज, यो देश सबै भन्दा हानिकारक र सेवा को आय संग मान्छे उपलब्ध अवकाश Zdeno रूपमा पर्यटक बीच लोकप्रिय एक प्रदान उच्चतम स्तर अलग छ। सहज कोठा, भद्र र सहयोगी कर्मचारी, प्यारा landscaped क्षेत्र संग भव्य होटल, टुर अपरेटरहरू आकर्षक चल्छ प्रस्ताव - यो टर्की छ।
टर्की मा आराम honeymooners र बच्चाहरु संग परिवार, र तीव्र सोख गर्न खोजिरहेका molozhednyh समूहहरूको लागि आदर्श छ। पर्यटक infraktruktura yalvlyaetsya देश भन्दा संसारमा विकसित को एक।
टर्की युरोप र यसको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक विशिष्टताको बताउँछन् जो महादेशमा को एशियाली भाग, छैन।
टर्की को इतिहास यसलाई व्यक्तिमा थाहा विशेष रोचक जो घटनाहरु, मा धनी छ, अधिक एक सय वर्ष छ। यहाँ तपाईँले धेरै आश्चर्यजनक संग्रहालयहरु र ऐतिहासिक स्मारक भ्रमण गर्न अवसर (उदाहरणका लागि, इस्तांबुल Hagia सोफिया , र ANATOLIAN Civilizations को संग्रहालय र अंकारा मा Citadel वरिपरि पुरानो शहर)। धेरै टर्की शहर आफूलाई संग्रहालयहरु छन्।
यो जलवायु धेरै थोरै र सुखद छ। तपाईं अप्रिल देखि नोभेम्बर सम्म समुद्र मा पौडी खेल्न सक्छ। टर्की चार द्वारा धोए छ ईजियन,: समुद्र काला, मार्मारा र भू-मध्य। एंताल्या, BELEK, Alanya, बोडरम, Marmaris र Kemer - - यो शहर-रिसोर्ट्स एक टर्की मा आराम सबै भन्दा राम्रो विकल्प समुद्री मनोरञ्जन छ।
टर्की आतिथ्य को रहस्य
रूस यसको कुख्यात "सबै समावेशी" प्रणालीको लागि टर्की प्रेम। के तपाईं साँच्चै ख्याल गर्दै हुनुहुन्छ र सबै पक्ष त मा आवश्यक मा घेरिएको हुँदा सबै अल्छे छुट्टी लागि डिजाइन गरिएको छ एक छुट्टी हेरविचार कर्मियों। तपाईं समुद्र तट मा झूठ गर्न सक्छन् र शीतल पेय prepodnosimye आनन्द, र तपाईं पनि दिन वा रात को लगभग कुनै पनि समय प्रदान गर्न तयार हुनुहुन्छ भनेर भ्रमण गर्न रोमाञ्चक यात्रा बीच मा।
टर्की मा पर्यटन
टर्की मा परमिट को लागत हरेक वर्ष बढ्दै छ। यो सेवा र जीवित पर्यटकहरुका लागि अवस्था सान्त्वना को स्तर को वृद्धि, मुख्यतया कारण छ।
तपाईं भौचर मा सुरक्षित गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले टर्की गर्न अन्तिम मिनेट यात्राको मा यात्रा एजेन्सी अनुरोध पठाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो लागत सामान्य दर भन्दा धेरै कम छ। त्यसैले, तपाईं आफ्नो समय व्यवस्थापन गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भने, टर्की गर्न अन्तिम मिनेट यात्राको वास्तविक Boon र एक सुन्दर घमाइलो कथा एक पास हुन सक्छ।
त्यस अवस्थामा, आफ्नो छुट्टी कडाई केही समय फ्रेम द्वारा नियमन गरिएको छ भने, अनुमति को अधिग्रहण अग्रिम फिक्री गर्न आवश्यक छ।
टर्की मा होटल
टर्की मा होटल को विशिष्टताको तिनीहरूले, त्यसैले सुन्दर आराम गर्दै छन् र उनि लगभग सारा रहन छोड्न कि गर्न सक्छन् पट्टाइ लाग्ला छैन यात्री लागि ठूलो कार्यक्रम प्रस्ताव छ। होटल द्वारा प्रस्तावित गतिविधिहरु गम्भीर मान्छे दुवै बच्चाहरु र वयस्क गर्न चासो हो। बार, रेस्टुरेन्ट, टेनिस कोर्ट, डाइभिङ क्लब, पानी पार्क, छोराछोरी, एनिमेसन र धेरै पर्यटकहरु प्रदान सम्भावनाहरू, टर्की होटल सूचीमा थप क्लबहरू।
यो देश रात मार्फत काम, रात क्लब र discos सबै प्रकार मा धनी छ। टर्की मा बिदाहरू लगभग सबै अपवाद बिना मनपर्छ।
अर्डर पर्यटन निवास र आगमन को मिति को अवस्था को आवश्यकताहरु संग आवेदन पठाउने, को यात्रा एजेन्सी वा अनलाइन मोडमा इन्टरनेट मार्फत व्यक्तिमा हुन सक्छ। उत्तरार्द्ध विकल्प अनिवार्य समय बचाउँछ र होटल मा शहर बारेमा आवश्यक सबै जानकारी, होटल, पर्यटन मा मूल्यहरु र आवास प्राप्त गर्न धेरै सुविधाजनक तरिका हो। तपाईं अवकाश विकल्प को प्रस्ताव तुलना र, तपाईं को लागि सबै भन्दा उपयुक्त छनौट घर छोडेर बिना गर्न सक्नुहुन्छ। आदेश, तपाईंले आदेश पुष्टि कि यात्रा एजेन्सीहरू को प्रबन्धकहरू संग सम्पर्क र सेवाको लागि भुक्तानी।
कपास महल - जहाँ पामुक्काले छ?
मशरूम स्पंज: पाक कला गुण, वर्णन, वितरण
प्रकाश को मात्रा कसरी वृद्धि गर्न
महसुल "बीलाईन" - "300 को सबै"। विवरण, समीक्षा, जडान
हरेक दिन को लागि उचित पोषण! मेनु, तपाईं आफ्नो सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ!